dnScoop milaza fa dnScoop.com tsy dia misy dikany | Martech Zone
Talata, Febroary 27, 2007 Talata, Febroary 27, 2007 Douglas Karr
Aaron nanondro fa dnScoop.com, toy ny motera fanombanana hafa, dia tsy misy dikany.
Aza mino azy ireo? Anontanio fotsiny dnScoop ohatrinona dnScoop.com dia mendrika… Mampihomehy, manaiky izy ireo:
Angamba izaho irery io, fa tokony nopetahako ny kaody mba hitenenako fa mitentina 500k $.
Fitaovana 3 lehibe tsy hita ao amin'ny Fikarohana Blog Google?
Mar 2, 2007 amin'ny 10: 50 AM
Mahazo sipa avy amin'ireo tranonkala sarobidy ireo aho. Androany dia tsy mino aho fa ny anaran'ny sehatra dia afaka mametraka soatoavina amin'ny tranonkala iray.
Nahaliana ahy izany, nandeha tany amin'ny dnscoop aho, ary mitentina 64,480 2.5 $ ny tranokalanako araka ny filazan'izy ireo. Raha raisiko io isa io ary zaraiko amin'ny fidiram-bolan'ny tranokala, dia izany no hataoko ao anatin'ny XNUMX taona raha toa ka manjaka ny fepetra ankehitriny (izay azoko antoka fa hanatsara hatrany). Saingy tombantombana tsara izay manampy anao hanombatombana tsara kokoa ny tranokalanao. Misy mpividy ve ??? 😉
Apr 16, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
DNScoop dia mitovy amin'ny http://www.smartpagerank.com, ary ratsy io amin'izany. Mampiasa tetika ambany tanana izy ireo hangalarana ny fivezivezena amin'ny tranokala! Azafady mba vakio ity raha mila fanazavana tsara kokoa: http://www.dnscoopsucks.com/
Apr 19, 2008 amin'ny 8: 14 AM
Saingy tsy maintsy milaza ianao fa matetika dia milay ny soatoavina. Tahaka ny fisalasalako fa hisy hanome 20K $ ho an'ny tranokalako, nefa milaza fa mendrika izany betsaka izany.
Mirona hanome lanja ambonimbony kokoa noho izany ny ankamaroan'ny serivisy hafa.
Oct 16, 2009 amin'ny 6: 59 AM
Hi! Nahita tranonkala maro toy izany aho izay manome famakafakana fifaninanana maimaimpoana. Ny tiako indrindra dia ”Target =” _ banga ”>http://www.estimix.com . Toa miteraka fampahalalana marina momba ny fifamoivoizana ihany koa.